JUNE&MAY: Edwin (မှတ်တိုင်၅)
Posted by JuneOne at 12:05 AM
JuneOne June 1, 2013 at 12:35 AM
Victor Feng happy birthday Edwin!
Winny Khinmg Happy Birthday ... Edwin!!!
Aunty Tint Happy Pre Birthday Edwin
Naychi Maung Happy Birthday!!!
Theingi Maw happy birthday..edwin
Khin Su Htwe Win very cute happy birthday,edwin!
Myat Phyo Happy happy birthday clever boy, Edwin
Thandar Thwin Happy Birthday Edwin.
Kyi Kyi Khin Happy Birthday Edwin!
Maw Naing happy birthday ပါသားသားရေ
Mie Nge ပျော်ရွှင်ပါစေ သားသား အက်ဝင်းးးးးးး ၀င်း ဆိုတဲ့အတိုင်း အရာရာကို အောင်မြင်ပါစေ သား သား ကွန်မန့်တွေလာဖတ်နော်
HBD Edwin lay!
Thandar Lwin June 1, 2013 at 8:45 AM
အက်ဝင်လေး ငါးနှစ်တောင်ပြည့်သွားပေါ့ ။
လိမ်မာတဲ့သားလေးမို့ သားကောင်ရတနာလေး ဖြစ်မှာ သေချာတာပေါ့ ။
ဖေဖေ မေမေ ညီမလေးတို့ နဲ့ အတူ အမြဲပျော်ရွှင်ကျန်းမာပါစေ ။
ဒီလို သားလေးတွေ သမီးလေးတွေ တော်တာ လိမ်မာတာ ကျော့ကြောင့် ၊ ကျော့သိပ်တော်လို့ ....